China 60w Ogidi Mkpuchi Anya China Manufacturers & Suppliers & Factory
60w Ogidi Mkpuchi Anya - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka 60w Ogidi Mkpuchi Anya)
60W LED Wall Pack Mpụga Mpụga 5000K
60W Egwuregwu Wall Wall ahia na Industrial Outdoor Lighting, IP65 Waterproof - DLC & ETL. 60W ikanam Wall Ìhè bụ Premiya oke maka ulo oru caliber ọkụ a dịgasị iche iche nke ntọala, dị ka entryways, na-adọba ụgbọala, n'ụlọ nkwakọba, barns, na-amụkwasị, na ndị ọzọ. Site na mpempe ọkụ ruo 6,600 lumens, ndị a ọkụ...
ETL DLC Akwụkwọ a na-eduzi akwụkwọ na-eme ka ìhè 60W dị
Ngwunye Wall Wall kpuchie Ìhè ahia na Industrial Outdoor Lighting, IP65 Waterproof - DLC & ETL. 60W Ogwe Mgbidi Ngwá Agha Nhọrọ bụ nhọrọ nchịkọta nke ọkụ ọkụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ntọala dịgasị iche iche, dịka nbata, ebe ụgbọala, ụlọ nkwakọba ihe, barns, ọkwá, na ihe ndị ọzọ. Site na mpepụta ọkụ ruo 6,600 lumens,...
Uhie na-enwu gbaa 60W na-eburu ọkụ ọkụ
60W LED WallPack Enwu ahia na Industrial Outdoor Lighting, IP65 Waterproof - DLC & ETL. LED Wallpack Lights bụ nhọrọ ntanetị maka ọkụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ntọala dịgasị iche iche, dịka nbata, nkwụnye ụgbọala, ụlọ nkwakọba ihe, barns, ọkwá, na ndị ọzọ. Site na mpempe ọkụ ruo 6,600 lumens, ndị a LED WallPack...
6600lm 5000K 60W ada mgbidi mkpọ oriọna
60W Egwuregwu Wall Wall ahia na Industrial Outdoor Lighting, IP65 Waterproof - DLC & ETL. LED Wallpack bụ nhọrọ ntanetị maka ọkụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ntọala dịgasị iche iche, dịka nbata, nkwụnye ụgbọala, ụlọ nkwakọba ihe, barns, ákwà, na ihe ndị ọzọ. Site na mpepụta ọkụ ruo 6,600 lumens, ndị a Wall Pack ga-enye...
Bbier 60W ada mgbidi mkpọ 180W otu
Bbier 60W LED Wall Pack ahia na Industrial Outdoor Lighting, IP65 Waterproof - DLC & ETL. LED Wall pack 180W nke a bụ nhọrọ ntanetị maka ọkụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ntọala dịgasị iche iche, dịka nbata, nkwụnye ụgbọala, ụlọ nkwakọba ihe, barns, ákwà, na ihe ndị ọzọ. Site na mpepụta ọkụ ruo 6,600 lumens, ọkụ Wall...
Azụmahịa na Ọrụ N'èzí Wall Pack ọkụ 60W
Azụmahịa na Ọrụ N'èzí Wall Pack ọkụ 60W Enwu Wall Pack ọkụ 60W IP65 Waterproof - DLC & ETL. Wall pack Lighting 60W bụ nhọrọ mbụ maka ọkụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ntọala dịgasị iche iche, dị ka ụzọ nbata, ebe ndị na-adọba ụgbọala, ụlọ nkwakọba ihe, barn, ákwà, na ihe ndị ọzọ. Site na mpepụta ọkụ ruo 6,600 lumens,...
5000K 60W LED Wall Pack maka Ụlọ
5000K 60W LED Wall Pack maka Ụlọ 60W LED Wall Pack maka Ụlọ IP65 Waterproof - DLC & ETL. LED Wall Pack bụ nhọrọ mbụ maka ọkụ ọkụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe n'ọtụtụ ntọala, dịka nbata, nkwụnye ụgbọala, ụlọ nkwakọba ihe, barns, ọkwá, na ihe ndị ọzọ. Site na mpepụta ọkụ ruo 6,600 lumens, ndị a Wall...
Mkpu mgbidi ọkụ 80W weere ọkụ 5000K 8000LM
Mkpu mgbidi ọkụ 80W weere ọkụ 5000K 8000LM Ngwunye Wall Wall IP65 Waterproof - DLC & ETL. 80W LED LIGHT bụ nhọrọ ntanetị maka ọkụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ntọala dịgasị iche iche, dị ka ụzọ nbata, ebe ụgbọala, ụlọ nkwakọba ihe, barn, ákwà, na ihe ndị ọzọ. Site na mpepụta ọkụ ruo 6,600 lumens, ndị a...
Mmiri ọkụ 80W LED Wall Pack Mmiri 5000K
Mmiri ọkụ 80W LED Wall Pack Mmiri 5000K Ọkụ WallPack IP65 Waterproof - DLC & ETL. 80W Mgbidi mgbidi LED bụ LIGHT bụ nhọrọ ntanetị maka ọkụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ntọala dịgasị iche iche, dịka nbata, nkwụnye ụgbọala, ụlọ nkwakọba ihe, barns, ákwà, na ihe ndị ọzọ. Site na mpepụta ọkụ ruo 6,600 lumens, ndị a Mgbatị...
Home Depot Led Wall Pack Fitit 80W
Home Depot Led Wall Pack Fitit 80W Ọkụ WallPack IP65 Waterproof - DLC & ETL. 80W Mgbidi mgbidi LED bụ LIGHT bụ nhọrọ ntanetị maka ọkụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ntọala dịgasị iche iche, dịka nbata, nkwụnye ụgbọala, ụlọ nkwakọba ihe, barns, ákwà, na ihe ndị ọzọ. Site na mpepụta ọkụ ruo 6,600 lumens, ndị a Mgbatị Wall...
80 Watt Dusk na Dawn LED Wall Pack
80 Watt Dusk na Dawn LED Wall Pack DLC & ETL. 80 watt Dusk to Dawn led wall pack bụ nhọrọ mbụ maka ọkụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ntọala dịgasị iche iche, dị ka entryways, ebe a na-adọba ụgbọala, ụlọ nkwakọba ihe, barn, ákwà, na ihe ndị ọzọ. Site na mpepụta ọkụ ruo 6,600 lumens, ndị Led Wall Pack ga-enye ìhè dị gị...
DLC 8000lm 80W LED Wall Pack Light
DLC 8000lm 80W LED Wall Pack Light DLC & ETL. 80 watt Dusk to Dawn led wall pack bụ nhọrọ mbụ maka ọkụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ntọala dịgasị iche iche, dị ka entryways, ebe a na-adọba ụgbọala, ụlọ nkwakọba ihe, barn, ákwà, na ihe ndị ọzọ. Site na mpepụta ọkụ ruo 6,600 lumens, ndị Led Wall Pack ga-enye ìhè dị gị...
DLC ETL IP65 Ada Wall Pack 80W Ngwado
DLC ETL IP65 Ada Wall Pack 80W Ngwado DLC & ETL. 80 watt Dusk to Dawn led wall pack bụ nhọrọ mbụ maka ọkụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ntọala dịgasị iche iche, dị ka entryways, ebe a na-adọba ụgbọala, ụlọ nkwakọba ihe, barn, ákwà, na ihe ndị ọzọ. Site na mpepụta ọkụ ruo 6,600 lumens, ndị Led Wall Pack ga-enye ìhè dị gị...
Bbier na-enwu ọkụ 80W eburu ọkụ ọkụ mgbidi
Bbier na-enwu ọkụ 80W eburu ọkụ ọkụ mgbidi LED Wallpack Lighting 80W, 110lumen per watt dị ka 250W HPS / MH Bulbs, ihe ntinye eji ihe ọkụkụ ọkụ ọkụ na ọkụ na ọkụ na ọkụ na ọkụ na ọkụ na ọkụ. 1. Mee site na: Bbier Plant (Ụlọ ọrụ) 2. Ọ bụ isi iji dochie anya mgbidi mgbidi nke 250-300 watt na New fixtures. 3. Nzube Ụlọ...
Ntupụta ohuru Obere mgbidi mgbidi 15W 20W
Inye Ike: 100pcs a week
Ntupụta ohuru Obere mgbidi mgbidi 15W 20W Obere LED Wallpack 20W 110 elekere per watt yiri 70W HPS / MH Bulbs, oriọna ahụ ji ihe ọkụkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ, na ngwa maka mgbidi ụlọ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ebe ndị ọzọ nwere ike ịnweta ọkụ. 1. Mee site na: Bbier Plant (Ụlọ ọrụ) 2. Ọ bụ isi iji dochie anya mgbidi mgbanaka 70...
Obere Wall Wall Light 20W 30W Wall Pack
Obere Wall Wall Light 20W 30W Wall Pack Obere LED Wallpack 20W 110 elekere per watt yiri 70W HPS / MH Bulbs, oriọna ahụ ji ihe ọkụkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ, na ngwa maka mgbidi ụlọ na ụlọ oriri na nkwari akụ yana ebe ndị ọzọ nwere ike ịnweta ọkụ. 1. Mee site na: Bbier Plant (Ụlọ ọrụ) 2. Ọ bụ isi iji dochie 250Watt omenala na...
20W Dusk na Dawn LED Mini Wall Pack
20W Dusk na Dawn LED Mini Wall Pack Obere LED Wallpack 20W 110 elekere per watt yiri 70W HPS / MH Bulbs, oriọna ahụ ji ihe ọkụkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ, na ngwa maka mgbidi ụlọ na ụlọ oriri na nkwari akụ yana ebe ndị ọzọ nwere ike ịnweta ọkụ. 1. Mee site na: Bbier Plant (Ụlọ ọrụ) 2. Ọ bụ isi iji dochie 250Watt omenala na...
3000K 20W ada mgbidi mkpọ na dusk-to-dawn
3000K 20W ada mgbidi mkpọ na dusk-to-dawn Obere LED Wallpack 20W 110 elekere per watt yiri 70W HPS / MH Bulbs, oriọna ahụ ji ihe ọkụkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ, na ngwa maka mgbidi ụlọ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ebe ndị ọzọ nwere ike ịnweta ọkụ. 1. Mee site na: Bbier Plant (Ụlọ ọrụ) 2. Ọ bụ isi iji dochie 250Watt omenala na...
20W 30W mgbidi mkpọ ọkụ n'èzí
20W 30W mgbidi mkpọ ọkụ n'èzí Obere LED Wallpack 20W 110 elekere per watt yiri 70W HPS / MH Bulbs, oriọna ahụ ji ihe ọkụkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ, na ngwa maka mgbidi ụlọ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ebe ndị ọzọ nwere ike ịnweta ọkụ. 1. Mee site na: Bbier Plant (Ụlọ ọrụ) 2. Ọ bụ isi iji dochie anya 70 Watt omenala Obere...
Ìhè 5000K mgbidi mkpọ ada ìhè 20W
Ìhè 5000K mgbidi mkpọ ada ìhè 20W mgbidi wuru ìhè 20W 110lumen per watt hà 70W HPS / MH Bulbs, ọkụ ọkụ mgbidi na- eji ihe ọkụkụ ọkụ ọkụ ọkụ, na ngwa maka mgbidi ụlọ na ụlọ oriri na nkwari akụ yana ebe ndị ọzọ nwere ike ịnweta ọkụ. 1. Mee site na: Bbier Plant (Ụlọ ọrụ) 2. Ọ bụ isi iji dochie anya mgbidi mgbidi 70 Watt...
3000K mgbidi mkpọ ọkụ n'èzí 30W
3000K mgbidi mkpọ ọkụ n'èzí 30W Mgbidi mgbidi dị n'èzí 30W 110lumen per watt hà 100W HPS / MH Bulbs, ọkụ ọkụ mgbidi a na- eji ihe ọkụkụ ọkụ ọkụ nke aluminum, na ngwa maka mgbidi ụlọ na ụlọ oriri na nkwari akụ yana ebe ndị ọzọ nwere ike ịnweta ọkụ. 1. Mee site na: Bbier Plant (Ụlọ ọrụ) 2. Ọ bụ isi iji dochie...
ada Obere mkpọ mgbidi na dusk-to-dawn 30W 5000K
ada Obere mkpọ mgbidi na dusk-to-dawn 30W 5000K Dugara Mini Wall mkpọ 30W 5000K 110lumen kwa watt hà 100W HPS / MH Bulbs, anyị Mini mgbidi mkpọ mee ihe aluminum okpomọkụ sink, na ngwa n'ihi na mgbidi ụlọ na hotel etc n'ebe ndị ọzọ na ike mkpa wallpack ọkụ. 1. Mee site na: Bbier Plant (Ụlọ ọrụ) 2. Ọ bụ isi iji...
Obere Wall Wall Light 30W Wall Pack
Obere Wall Wall Light 30W Wall Pack Wall Wall pack light 30W 110lumen per watt equal to 100W HPS / MH Bulbs, na 30W mgbidi mkpọ eji ihe ọkụkụ aluminum ọkụ, na ngwa maka mgbidi ụlọ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ etc. na ebe ndị ọzọ nwere ike mkpa mgbidi wall . 1. Mee site na: Bbier Lighting (Ụlọ ọrụ-shenzhen, China) 2. Ọ bụ isi...
mgbidi mkpọ ọkụ n'èzí 80W wallpack
mgbidi mkpọ ọkụ n'èzí 80W wallpack N'elu 80W wallpack , 110lumen per watt dị ka 250W HPS / MH Bulbs, ihe ntinye eji ihe ọkụkụ ọkụ ọkụ ọkụ na ọkụ na ọkụ, na ngwa maka mgbidi ụlọ na ụlọ oriri na nkwari akụ yana ebe ndị ọzọ nwere ike ịnweta ọkụ. 1. Mee site na: Bbier Plant (Ụlọ ọrụ) 2. Ọ bụ isi iji dochie anya...
60w Ogidi Mkpuchi Anya 60W Ogidi Mkpuchi Anya Ogige Mkpuchi Anya Ogige Mkpuchi Ogige Uhie 250W ekpuchi oriọna Ebube Mgbachi Anya 20W Ogige Uhie Ochie nke Elu 150w Osisi ọka